Denizli တွင်ဘတ်စ်ကားအသုံးပြုမှုသည် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိလာသည် - RayHaber
Homeတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ20 DenizliHale ကဘတ်စ်ကား Denizli အတွက်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရောက်ရှိသည်ကိုသုံးပါ
21 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 20 Denizli, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ 0
Denizli မြူနီစီပယ်၏အကူးအပြောင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းများအများအပြားကဏ္ဍများကကြိုဆိုခဲ့သည်။ Hallaçlar, Zeytinköyနှင့် Caravanserai မှ Gerzeli မြို့တော်ဝန်သူတို့ကမြူနီစီပယ်ဘတ်စ်ကားမှဖန်ဆင်းချိန်ညှိ၏နေထိုင်သူများအဖြစ်အကြီးအစိတ်ကျေနပ်မှုကြားသောပြောပါတယ်။
DENiZLiLiLER ပိုမြန်သည်မြို့တော်မြူနီစီပယ်စတင်ခဲ့ကြောင်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသွင်ပြောင်းဘို့တတ်နိုင်နှင့်အဆင်ပြေခရီးသွားအများအပြားကဏ္ဍများကကြိုဆိုခဲ့သည်။ အစပျိုးလှုပ်ရှားမှုများကို၏အတိုင်းအတာတစ်ခုဥာဏ်နှင့်တကွနိုင်ငံသားများမှအများကြီးပိုကောင်းဝန်ဆောင်မှုအတွက်မြို့ပြအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, လူနေအိမ်ဧရိယာကြီးထွားလာ, လူဦးရေသိပ်သည်းမှုများနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်တစ်ဦးချင်းစီလမ်းကြောင်းကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်အထိရောက်ဆုံးထုံးစံ၌အသုံးပြုရန်ပစ်မှတ်ထားပြီ။ ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနိုင်ငံသားများကကြိုဆိုခဲ့ပြီးအစီအစဉ်များစတင်ခရီးသည်အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်ဘတ်စ်ကား, ပိုပြီးအချက်များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာပိုမိုလျင်မြန်စွာနှင့်ပိုပြီးစီးပွားရေးအရလက်လှမ်းမမီ၏ပျော်ရွှင်မှုကိုတွေ့ကြုံသူကဆိုသည်။
Denizli မြို့တော်ဝန် Osman Zolan, ပိုမြန်, သူတို့အသွင်ပြောင်းတတ်နိုင်နှင့်အဆင်ပြေခရီးသွားများအတွက်ထိရောက်သောထုံးစံ၌ဆက်လက်ဆောင်ရွက်စတင်သတိပြုမိသူအစီအမံများစွာသောကဏ္ဍများကကြိုဆိုဟုပြောသည်။ သို့သော်ကျောင်းဖွင့်ပွဲနှင့်အတူရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအချိန်ဇယားဖို့အကူးအပြောင်း, သူတို့ကသမ္မတ Osman လျက်ဇိုလာကိုဖော်ပြရန်ဘယ်အရာကိုဆက်လက်ထားရန်ရှိပြီးသားလမ်းကြောင်းများထပ်တိုးဘတ်စ်ကားလိုင်းများခရီးစဉ်၏နံပါတ်တိုးပွားလာ၏လိုအပ်ချက်အတွက်ဒေသများ, "ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးစားပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်ဆန်ချွေနှင့်အဆင်ပြေမှလူတွေပိုပြီးအောင်နေဖြင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အများပြည်သူဘတ်စ်ကား၏အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုဆွဲဆောင်မှုကြောင်း ပူဇော်ဖို့ခရီးသွားလာ "ဟု၎င်းကပြောသည်။
Osman Mukhtar နိုင်ငံတော်သမ္မတ Zolan ကျေးဇူးတင်ကြောင်း
အဆိုပါစည်ပင်သာယာအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်စတင်ခဲ့တဲ့ Metropolitan အသွင်ပြောင်းအများအပြားကဏ္ဍများကကြိုဆိုခဲ့သည်။ Hallaçlarနှင့် Caravanserai သူတို့လုပ်သောအစီအစဉ်များ၏နေထိုင်သူများအဖြစ်အကြီးအစိတ်ကျေနပ်မှုကိုကြားZeytinköy၏မြို့တော်ဝန်မှ Gerzeli သူကဆိုသည်။
မြို့တော်ဝန် Serkan Zeytinköyနှင်း: ကျွန်ုပ်တို့၏စည်ပင်သာယာဘတ်စ်ကားလိုင်းမတိုင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးနားချင်း2အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ လောလောဆယ်ဒီနံပါတ်ကိုပင်6output ကို။ အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားများသာ Bayramyeri နှင့် 15 လေယာဉ်တခါသွားရနိုင်ပါတယ်။ အခုကေဘယ်လ်ကြိုးကား Pamukkale တက္ကသိုလ်, လုပ်ရပ်, အုပ်ချုပ်ရေးရုံးထဲမှာ Servergazi ဆေးရုံနှင့်အများအပြားကပိုပွိုင့်ကိုတိုက်ရိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။ အတိတ်ကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေတစ်ဦးထက်ပိုဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်ဗန်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ နယူးလိုင်းများအစီအစဉ်နှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်ဖြစ်ကြသည်။ မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Osman လျက်ဇိုလာပြုသောအမှုနှင့်အတူအဘယ်သူလုပ်ဖို့အာမခံမည်, အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Hallaçlarမြို့တော်ဝန် Hamdi Lightning: တစ်နာရီကိုတစ်ဦးကဒေသခံဘတ်စ်ကားယခင်ကဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုတော့အဲဒီအခြိနျပြိုလဲခဲ့သည်။ ငါတို့အဘို့အကပိုပြီးလှပခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့မိနစ် 55, 20-25 အတွက်ဗဟိုမှ Denizli လမ်းကြောင်းသွားခဲ့ကြသည်ခင်မှာယခုကျွန်တော်တစ်မိနစ်လျှင်ပျမ်းမျှရောက်ရှိဖို့။ လမ်းကြောင်းတိုရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ဝမ်းမြောက်စေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘတ်စ်ကားမြို့လယ်သို့တိုက်ရိုက်သွား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေဟာနှစ်ဦးစလုံးနံနက်ယံ၌အလုပ်လုပ်ရန်သွားရတော်မူသောငါတို့၏နိုင်ငံသားများအဘို့ကောင်းသောနှစ်ဦးစလုံး။ မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Osman လျက်ဇိုလာကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အနားမှာကျနော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၌ရှိကြ၏, သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်တကွလူအပေါင်းတို့စေတနာ့ဝန်ထမ်းဖို့အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင့ကောင်းကြီးပေးကြလော့။
နောက်ကျော caravanserai ပညာရှိပုညု၏မြို့တော်ဝန်: ဝေးဗဟိုကနေကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အတွင်း။ ယခင်ကကျွန်တော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အခက်အခဲများကြုံနေရခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ဘတ်စ်ကား လုပ်. လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲသွားခဲ့အစီအစဉ်များနှင့်အတူ amplified ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကျေနပ်ဖြစ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်ရုံး, Aydem, ဒေသတွင်းမှတစ်ကြိမ် summerhouse အဖြစ်ဖိုရမ်ကျနော်တို့လွှဲပြောင်းခြင်းမရှိဘဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားများလည်းကျနော်တို့မှာအများကြီး။ ဒီသဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး Osman လျက်ဇိုလာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Gerzeli ခရိုင်အကြီးအကဲ Kemal ဒီခဲ့: ဘတ်စ်ကားအလွန်ကောင်းသောအစီအစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်အခါ။ ယခင်ကဘတ်စ်ကားရှည်ကြားကာလမှာတံပိုးမှုတ်သောအခါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်အလုံအလောက်မပါဘူး။ ဒါကြောင့်လာအဖြစ် Now ကိုပိုပြီးဘတ်စ်ကားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပ်ကွက်နှင့်ကွေ့ကျင်လည်ကျက်။ hours ကိုလည်းမကြာခဏအသုံးပြုထားကြ၏။ မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Osman Zolan အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Batuhan သွားဘက်ဆိုင်ရာ: ငါ့ရပ်ကွက်အတွင်းဈေးရောင်းZeytinköyငါ Albayrak ရင်ပြင်၌ထိုင်တယ်။ ငါပြီးသား2ယာဉ်များလာရန်အလုပ်ငါ၏အရပ်ဌာနကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ လက်ရှိစည်းမျဉ်းလာနှင့်တစ်ခုတည်းဘတ်စ်ကားလိုင်းနှင့်အတူသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်အကျိုးရှိဖြစ်လာသည်။ အရမ်းကျေနပ်တည်းဖြတ်ခြင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတ Osman လျက်ဇိုလာဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးမှအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Hajar Sultani: ငါ Denizli တှငျနထေိုငျ5နှစ်ပေါင်း။ ငါဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရင်ပြင်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ မသှားရှေ့တော်၌ထိုအတိတ် 1 နာရီ၌ငါ့အလုပ်ခွင်ကိုသွား, ငါ2ကနေရပ်တန့်ဖို့ဘတ်စ်ကားအတွင်းလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိငါလမ်းကြောင်းနှင့်အချိန်ဆုံးရှုံးများ၏ပြောင်းလဲမှုအသက်ရှင်နေထိုင်ကြဘူးဘယ်မှာငါ၏အအလုပ်ခွင်ကိုညွှန်ကြားသွားခြင်းဖြစ်သည်။ နံနက်စာ built နှင့်ငါ့ကလေးတွေကိုအလုပ်သို့သွားနိုင်ပါသည်, လူတိုင်းအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရှေ့ဆက်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်Bursanınကေဘယ်လ်ကားပေမယ့်narçiçeðiအစိမ်းရောင်-အဖြူပိုပြီးဆွဲဆောင်မှု 21 / 05 / 2013 cable ကိုရှေ့ဆက်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကားတစ်စီးပေမယ်narçiçeðiပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုအစိမ်းရောင်-အဖြူစိမ်းတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သစ်မှာကေဘယ်လ်ကားများ၏အရောင်အဘို့အင်တာနက်နှင့်အဖြူအရောင်များအပေါ်စတင်သောရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရှေ့ဆက်သွားBursanın။ သို့သော်အထူးသဖြင့်အများပြည်သူအတွက်ကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမြင်narçiçeðiအဆိုပါ Silkworm လမ်းရထားများ၏အရောင် ... စဉ်ဆက်မပြတ်ဒီကော်လံ၏အရောင်ဖတ်, သူတို့ကကျနော်တို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 15 အပေါ်မှတ်စုလွှဲပြောင်းငါသိ၏။ bursa.bel.t တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကအင်တာနက်လိပ်စာပေါ်ဖြန့်ချိခဲ့သည်ခွငျးအားဖွငျ့တစျဦးကဆောင်းပါး, ကျနော်တို့မေးခွန်းလွှာရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာ "ဟု New ကေဘယ်လ်ကားအဘယျသို့အရောင်? များမှာ" ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များအတွက်စစ်တမ်း၏ပထမနှစ်ရက်ချမဲအရေအတွက်က 22 367 တထောင်အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ မြို့တော်ရဲ့ web site ကို၎င်း, အစိမ်းအဖြူအစိမ်းနဲ့အနီဝင် ...
မရယူဆွဲဆောင် Hale ကမှကက်စပီယန်အကူးအပြောင်းလမ်းကြောင်းကို 09 / 03 / 2016 မရယူဆွဲဆောင် Hale ကမှကက်စပီယန်အကူးအပြောင်းလမ်းကြောင်းကို: အင်္ဂါနေ့က Trans-ကက်စပီယန်လမ်းကြောင်း multimode အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, မတ်လ 8 The Grand Tarabya ဟိုတယ်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့် The အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များတူရကီ Kenes အားဖြင့်တည်ခင်းဧည်ခဲ့သည်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်တူရကီ Kenes ဗျူရိုကရက်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏အလငျး၌ပွငျဆငျရနျ UTIKAD ရထားနှင့် Intermodal အလုပ်အဖွဲ့ကိုယ်စားပြုကိုလည်း Turan ÖzdemirKayıhanအစီရင်ခံစာ၏ Chairman လည်းတင်ဆက်မှု, Kenes တူရကီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ဝန်ကြီးများမှပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါကက်စပီယန်အကူးအပြောင်းလမ်းကြောင်းကိုအပေါ်ကြုံတွေ့ပြဿနာများ; အင်္ဂါနေ့, မတ်လ 8 Trans-ကက်စပီယန်လမ်းကြောင်း multimode အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲစားပွဲပေါ် ...
အဆိုပါ 2013 မော်ဒယ် DACIA မော်ဒယ်ဆွဲဆောင်အပေးအယူများ (ဓာတ်ပုံပြခန်း) တွင် 05 / 04 / 2014 အဆိုပါ 2013 မော်ဒယ် DACIA မော်ဒယ်မှာတော့ဆွဲဆောင်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်: သက်တမ်း 2013 လကြာသုညရာခိုင်နှုန်းသာအတိုးအပေးအယူရာပူဇော်သက္ကာကိုအားလုံး Dacia ခရီးသည်များ၏မော်ဒယ်များနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးမော်ဒယ်များအတွက်ဧပြီလ 15.000 15TL အတွက် Dacia, ။ နောက်တဖန် Maxx 2013TL အကျိုးစီးပွားတက်, အလ 24 48.000 ရာခိုင်နှုန်းကို Protected ထားတဲ့ခရက်ဒစ်ကာကွယ်မှုအာမခံ, အခြားအခွင့်အလမ်းများများအတွက် 0,99 Dacia မော်ဒယ်များ, 48TL များအတွက်သက်တမ်း 48.000 1,09 ရာခိုင်နှုန်းကိုတစ်လလျှင်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်အတိုးနှုန်း။ ကင်ပိန်း Sandero Ambiance မြင်းကောင်ရေ 2013TL အတွင်း 1.2V 16 75 30.550 မော်ဒယ်များ,5ထိုင်ခုံနေရာ Lodgy 1.5 မြင်းကောင်ရေ dCi ဆုရှင် 90 xnumx'tl '' မှာစတင်သည်။
ထို့အပြင်မေလယ်ယူရန်အခုတော့ Pay ကို xnumx't နှင့်ဆိတ်ကွယ်ရာဆွဲဆောင်မှုအပေးအယူ (ဓာတ်ပုံပြခန်း) တွင် Renault 08 / 05 / 2014 Renault ကလည်းမေလတွင်ယ်ယူရန်အခုတော့အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေ xnumx't နှင့်ဆွဲဆောင်မှုအပေးအယူ Pay, Renault ကမေလအတွက်အားလုံးခရီးသည်တင်မော်တော်ယာဉ်များအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေဖောက်သည်ဆွဲဆောင်မှုအပေးအယူပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ 2015, 2015 နှင့်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးသင်္ကေတ 48.000TL Clio 24TL ဖုံးလွှမ်းသည်အထိခိုင်လုံသော 1.22 လအတွင်း 36 မေလ 48 များအတွက် 1.25 အတိုးနှုန်းကမ်းလှမ်း, Clio အားကစား Tourer 31TL ကိပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် 2014 လကြာချေးငွေပမာဏကိုနှုန်းအများဆုံး 39.950 ငွေကြေးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး "ငွေပေးချေ xnumx't အခုတော့ဝယ်ပါ" xNUMXTL, Fluence xNUMXTL, xNUMXTL HB Megan, ရှုခင်းသာ xNUMXTL နှင့်လတ္တီတွဒ် xnumxtl ကနေစတင်စျေးနှုန်းများနှင့်အတူရောင်းချဘို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်နေကြသည်။ Renault ကလည်းအားလုံးခရီးသည်မော်ဒယ်များနေဆဲအများဆုံးအတွက်ဖောက်သည်ရရှိနိုင် ...
ဧပြီလ Renaultda အလွန်ဆွဲဆောင်မှုအခွင့်အလမ်းများ (ဓာတ်ပုံပြခန်း) 04 / 04 / 2014 Renaultda ဧပြီလ Renault အတွက်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုအခွင့်အလမ်းများ, ဧပြီအားလုံးကိုခရီးသည်တင်မော်တော်ယာဉ်များအတွက်၎င်း၏ဖောက်သည်တစ်ဦးအလွန်ဆွဲဆောင်မှုအပေးအယူပေးထားပါတယ်။ 2013 အားလုံးခရီးသည်အတွက် Renault ကမော်ဒယ်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးမော်ဒယ်များ 15.000TL ကြောင့်သက်တမ်း 15 လကြာသုညရာခိုင်နှုန်းသာအတိုးအပေးအယူပါပဲ။ နေဆဲ 2013TL မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက် 24 48.000 ရာခိုင်နှုန်းကိုစိတ်ဝင်စားမှုကို run ဖို့ Maxx 0,99TL မော်ဒယ်များဘို့ရာခိုင်နှုန်းအတိုး 48 မှ 48.000 1,09 သည်အထိလအတွင်း Protected ထားတဲ့ခရက်ဒစ်ကာကွယ်မှုအာမခံအတွက်နောက်ထပ်အခွင့်အလမ်း, လ။ အသစ်ကသုညအကျိုးစီးပွားများအတွက် Clio နှင့် Clio အားကစား Tourer 2014TL များအတွက် 15.000 xnumxay မော်ဒယ်များလျှောက်လွှာများပါဝင်သည်။ Renault Clio ကင်ပိန်း၏ xnumxtl အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် ...
မရယူဆွဲဆောင် Hale ကမှကက်စပီယန်အကူးအပြောင်းလမ်းကြောင်းကို
အဆိုပါ 2013 မော်ဒယ် DACIA မော်ဒယ်ဆွဲဆောင်အပေးအယူများ (ဓာတ်ပုံပြခန်း) တွင်
ထို့အပြင်မေလယ်ယူရန်အခုတော့ Pay ကို xnumx't နှင့်ဆိတ်ကွယ်ရာဆွဲဆောင်မှုအပေးအယူ (ဓာတ်ပုံပြခန်း) တွင် Renault
ဧပြီလ Renaultda အလွန်ဆွဲဆောင်မှုအခွင့်အလမ်းများ (ဓာတ်ပုံပြခန်း)
cable ကိုကားတစ်စီးချိတ်ဆက်ရန် Bilecik ဆွဲဆောင်ဦးတည်ရာနေရာများ
သစ်သား - Denizli သစ်သားမီးရထားလိုင်းလမ်းမကြီးပြုပြင်မွမ်းမံရေးစီမံကိန်းကို - အအိပ်ချင်မူးတူး - ကြီးကြပ်ရေးနှင့်အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများလေလံ၏ Denizli လက်ဝါးကပ်တိုင်မီးရထားဘူတာလိုင်းလမ်းမကြီးပြန်လည်မွမ်းမံအလုပ်လုပ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မပြတ်မတောက်ပါဝါအရစ်ကျနဲ့ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းထောက်ပံ့ (Germencik ဒေသခံအချက်ပြစနစ်၏ပရိသတ်၌အသုံးပြုရရန် Denizli-လိုင်းဖြတ်အတွက်ဘူတာရုံမှလုပ်ရမည်)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စာရေးကိရိယာများခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီ Transparent အရစ်ကျနဲ့ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း (Germencik ဒေသခံအချက်ပြစနစ်၏ပရိသတ်၌အသုံးပြုရရန် Denizli-လိုင်းဖြတ်အတွက်ဘူတာရုံမှလုပ်ရမည်)